भर्खरै गएको भूकम्प ५.४ म्याग्निच्यूडको, केन्द्र विन्दु कहाँ ? « गोर्खाली खबर डटकम
भर्खरै महशुश गरिएको भूकम्प ५.४ म्याग्निच्यूडको रहेको बताएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले भारतमा गएको भूकम्पको धक्का नेपालमा पनि महशुस गरिएको बताएको छ । सोमबार राती ९ः१० बजे भूकम्पको धक्का महशुर गरिएको हो ।
सो भूकम्पको धक्का राजधनीमा समेत महशुस गरिएको थियो । भूकम्पको धक्का पूर्वी नेपालमा कडा महसुश भएको छ भने काठमाडौंमा पनि सामान्य महसुश भएको छ । पूर्वमा भने करिव एक मिनेटसम्म हल्लाएको स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् । भुकम्पका कारण स्थानीयहरु त्रसित भएर घर बाहिर निस्किएका छन् ।
आजको तपाइको राशिफलले के भन्दैछ ? सच्चा मनले भगवानको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्
प्रदर्शकारीमाथि अंधाधुन्ध गोली प्रहार पछि म्यानमारको सेनाले गरे एयर स्ट्राइक, ज्यान वचाउन थाइल्याडको शरणमा
के तपाईलाई थाहा छ ? वृहस्पतिमा ह्यान्डगनको गोलीको गति भन्दा हावाको गति तिव्र – एक अध्ययन ।